७७ जिल्लाबाटै ग्लोबल आईएमई ब्यांकको सेवा
काठमाडौंको सार्वजनिक स्थलमा भिख मागे कारबाही
पाँच अर्बका संरचना तयार, प्रतिष्ठान कि कलेज टुङ्गो छैन
उपेन्द्रले बोलाएको बैठकको बाबुराम पक्षद्वारा विरोध
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्ताव शुरू गर्नुअघिकै अवस्थामा
शेखर समूहले ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ विद्रोह गर्ने!
क्रसर उद्योगलाई सजिलो पार्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्न देउवाले बोलाए केन्द्रीय समिति बैठक
प्रदेश राजधानीमै फोन सेवा प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर पूर्व सांसद कार्की वामदेवको पार्टीमा (फैसला सहित)
यसरी गरियो नेपालमा बेमौसमी तरकारीको शुरुआत
विचार जीवनप्रसाद राई
नेपालमा तीन दशकअघि प्रारम्भ गरिएको बेमौसमी तरकारी खेतीले धनकुटाको भेडेटार र सिंधुवाका किसानको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ। अब स्थानीय सरकारले यसको अनुसरण गर्दै देशव्यापी बनाउन जरुरी छ।
बङ्गुरबाटै बन्न सकिन्छ मल र मासुमा आत्मनिर्भर
झापाको केर्खास्थित कुलुङ बङ्गुर फार्मकै बाटो पछ्याउँदै अहिले त्यस क्षेत्रमा ६५ वटा फार्म खुलिसके। किसानको यस्तो होस्टेमा सरकारले हैंसे गरिदिए दाना, मल र मासु उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा देशले फड्को मार्न सक्छ।
कफीबाट भित्र्याउन सकिन्छ वार्षिक ३६ खर्ब
नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १७ खर्ब हाराहारी छ। यस हिसाबले दुई आर्थिक वर्षको बजेट बराबर कफी एक वर्षमा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
प्रदेश १ ले इस्कुसबाटै भित्र्याउन सक्छ वार्षिक तीन अर्ब पूर्वि नेपालमा अत्यधिक उत्पादन हुने इस्कुसको प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न सकिए प्रदेशलाई नै आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सहयोग पुग्छ।
कृषिमा बिचौलिया: उन्मूलन कि व्यवस्थापन? किसान तथा उत्पादकको खेतबारीबाट उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुर्‍याउने माध्यमको व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नुको साटो बिचौलिया विरोधी कोरा बहसले समाधान दिंदैन।
गाईपालनसँग जोडिएका तीन सम्भावना गाईपालन नेपालमा सम्भावना बोकेको व्यवसाय हो। यसबाट अरू तीन विषयलाई पनि अवसरका रूपमा जोड्न सकिन्छ– पहिलो दूध, दोस्रो घाँस र तेस्रो अर्गानिक मल उत्पादन।
पार्कियाबाट आम्दानी पार्किया रुखोपाखो बारीमा लगाउँदा माटो समेत मलिलो हुने गर्छ। यसको पातले जमीनको उर्वराशक्ति बढाउन भूमिका खेल्छ।
धागो उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ नेपाल हामीले अहिले धागो उत्पादन र निर्यात गर्न सक्छौं भन्ने नै बिर्सिसकेका छौं। जबकि, यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै मजबूत बनाउन सक्छ।
स्वरोजगारी, पर्यटन र भकारी माछापालन भकारी माछापालनलाई सही व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गरे पर्यटक गाउँमै आउनेछन्। जनजीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ। पहाडी क्षेत्रमा शहरहरूको विकासमा मद्दत पुग्नेछ।
बंगुरबाटै बन्नसक्छ प्रदेश १ समृद्ध प्रदेश १ को स्पष्ट प्राथमिकता र पहिचान बन्न नसकिरहेको अवस्थामा बृहत् रूपमा बंगुर पालन गरी निर्यात गरेर आर्थिक विकासको नक्सा कोर्ने अवसर छ।
प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रममा के-के गर्नुपर्छ सुधार? शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम स्नातक गरेर पनि जागिरको आश नगरी स्वरोजगार बन्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनेहरूका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, बजेटमा कार्यक्रम समेटिने तर कार्यान्वयन नै नहुने समस्या देखिँदै आएको छ।
ड्रागन फलले दिलाएको खुशी सात-आठ वर्षअघिसम्म धेरैलाई थाहासम्म नभएको ड्रागन फलको जिब्रोमै झुण्डिने स्वाद र बढ्दो बजार मागले व्यावसायिक खेतीको सम्भावना देखाएको छ।
चिनियाँ रेलको उपयोग
चिनियाँ रेलमार्ग नेपाल आउनुअघि नै हामीले हाम्रा कृषि सम्भावनामा काम थाल्ने हो भने आज कल्पना जस्तो लाग्ने तथ्यांकहरू भोलि यथार्थ बन्नेछन् ।
साबुनको काम गर्ने नारू
ठूल्ठूला परियोजनाका चर्चामा साना लाग्ने पहलले देशलाई दिगो विकास दिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
समृद्धिको आधार हुनसक्छ बंगुर व्यवसाय
टिप्पणी जीवनप्रसाद राई
मासु बजारमा देखिएको नयाँ सम्भावनाले ढंग पुर्‍याए बंगुर व्यवसाय नेपाली समृद्धिको आधार हुनसक्ने देखाएको छ ।
अर्गानिक बजार, खै परीक्षण ?
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका केही ठाउँमा हरेक शनिबार बिहान ७–११ बजे अर्गानिक बजार लाग्ने गरेको छ। ती बजारमा बाजुरा, बझाङ, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोटलगायतका दुर्गमका जिल्लाहरूमा फलेका भाँगो, सिमी, गेडागुडी, मार्सी चामल, फापरको पीठो, कोदाको पीठो, मकै, गहुँ, आलु, गेडागुडी र फलफूलहरू पाइन्छन्। त्यसबाहेक दुर्गमका रैथाने बालीका बेकरी परिकार, दूध–दही, अचार आदि पनि पाइन्छन् ।
च्याउ चेतना (पुस्तक समिक्षा)
सबै च्याउ खान सकिन्छ तर कुनै च्याउ खाएपछि जीवनमा अर्को पटक च्याउ खाने अवसर प्राप्त नहुन सक्छ ।
किसानलाई पेन्सन होइन परियोजना देऊ
कृषि क्षेत्रमा ठूला परियोजना वा काम हेरेर अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराए सरकारले 'बेरोजगार किसान' ठहर गर्न लागेकाहरू आफैं राज्यलाई कर तिर्न सक्ने गरी कमाउन सक्छन् ।
नेपालको तराईदेखि हिमालसम्म मजाले फुल्ने–फल्ने सूर्यमुखीको खेतीमा योजनाकारको ध्यान नजानु खेदको कुरा हो।
आफ्नो सम्भावना पहिचान गरेर काम थालिसकेको दैलेखले स्किम, लगानी र सरकारी प्रोत्साहन खोजेको छ।